လူးဝစ် Martinez | 24/09/2021 15:00 | ယဉျကြေးမှု, italia
အ အီတလီ၏ဓလေ့ သူတို့ဟာ Greco-Latin လက်အောက်ခံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးရာစုနှစ်တွေတစ်လျှောက်စပိန်ရိုးရာတွေကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံတွေပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးအရေးအပါဆုံးနှင့်ဘိုးဘွားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလွန်ခြားနားသည်မဟုတ်ပေ။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမင်းကိုပြောဖူးတာတောင်မှ၊ အီတလီရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကသူတို့ကိုယဉ်ကျေးမှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြားလူမျိုးတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ထူးခြားမှုတွေရှိနေတယ်။ လက်တင်အလွှာမရ။ သူတို့မှာဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး၊ ဥပမာပြင်သစ်အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းတွေ (ဒီမှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် သူတို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) သို့မဟုတ် transalpine နိုင်ငံရှိသူများနှင့်ပေါ်တူဂီ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောအီတလီဓလေ့ထုံးတမ်းအချို့အကြောင်းသင်ပြောပြမည်။
1.1 ရိုးသားမှု၊ စစ်မှန်သောအီတလီ
1.3 ဘာသာတရား၊ အီတလီလူမျိုးများမှမွေးရာပါ
1.4 ကားမောင်းခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောကိစ္စ
1.5 အဝတ်အစား၊ ဖက်ရှင်သို့ပြန်သွားရန်
1.6 အော်ပရာ၊ အီတလီစစ်စစ်ထုံးစံ
ငါတို့အီတလီရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြောင်းမင်းကိုပထမဆုံးပြောရမယ့်အချက်ကငါတို့ကမင်းလိုလူမျိုးတွေကိုအများနဲ့တူတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအကြောင်းပြောပြမယ်။ Andalusian ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်ဂါလီစီယန်လူမျိုးများနှင့်ကွဲပြားသော Sicilian လူမျိုးများသည် Piedmontese လူမျိုးများနှင့်တူသည်။ သို့ရာတွင်လူမျိုးအားလုံးကဲ့သို့ဘုံယဉ်ကျေးမှုအလွှာသည်မြင့်တက်လာစေသည် အီတလီလူမျိုးအားလုံးလက်ဆင့်ကမ်းသောဓလေ့များမရ။ သူတို့ကိုကြည့်ရအောင်။
သင်အီတလီကိုခရီးသွားတဲ့အခါသင်အံ့သြဆုံးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း ၎င်း၏မြို့သားများ မြောက်ဖျားမှအစွန်းဆုံးတောင်ပိုင်းအထိနေထိုင်သူများသည်တစ်ခါတစ်ရံငြင်းခုံနေပုံရသည်။
၎င်းသည်clichéဟုထင်ရသော်လည်းမှန်သည်၊ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အီတလီလူမျိုးများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြသည် မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနဲ့မရ။ သူတို့သည်လက်ဖြင့်အလွန်အကျွံဟန်အမူအရာ၊ မြင့်သောအသံဖြင့်ပြောဆိုကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏လက်ဟန်များကိုအခြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် transalpinos စကားမဟုတ်သောဆက်သွယ်ရေးသည်စကားများထက်ပိုအရေးကြီးသည်။
အစားအစာလောကနှင့်ဆက်နွှယ်သောအီတလီဓလေ့ထုံးတမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်မြို့သားများနှစ်သက်သောဟင်းလျာများနှင့်၎င်းတို့ကိုသင်မသိလျှင်မကြိုက်နိုင်သောဘိုးဘွားအစဉ်အလာများဖြင့်ပြုလုပ်ရသည်။ သူတို့အကြောင်းကိုငါတို့ပြောပြမယ်။
သင်သူ့အိမ်တွင်အီတလီလူမျိုးတစ် ဦး လာရောက်လျှင်သင်သိသင့်သည်။ အစားအစာသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မရ။ သူကမင်းကိုစားဖို့သောက်ဖို့တစ်ခုခုအမြဲကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။ သူကမင်းကိုနေ့လည်စာဒါမှမဟုတ်ညစာအတူစားဖို့တောင်တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ ငါတို့ကမင်းအစားအစာလို့ပြောနိုင်တယ် ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလုံး အီတလီလူမျိုးများအတွက် သူတို့အတွက်အစာကျွေးတာထက်ပိုတာကလူမှုရေးလုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
နိုင်ငံအတွင်းစားသောက်ပွဲတက်ရောက်ရန်သင်သိသင့်သောအချက်အချို့ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်စားပွဲပေါ်တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရမည့်အရာဖြစ်သည် အစမရ။ ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့သူအားလုံးကိုခေါက်ဆွဲနဲ့ဘယ်တော့မှမဖွဲ့ဘူး၊ သူတို့နာမည်အတိုင်းပဲခေါ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ပင်လယ်စာများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ကုလားပဲပုံမှန် Sicilian စွပ်ပြုတ်၊ ပု fritattaကြက်ဥကျပ်ထုပ်တစ်မျိုး၊ ပု အာဖရိကFriuli ၏ပုံမှန်ကြွပ်ကြွပ်ဒိန်ခဲ၊ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့ Roman croquette တစ်ခုဖြစ်သည်။
antipasto ပြီးနောက်သင်ပထမသင်တန်းနှင့်ဒုတိယအကြိမ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။ ဤအရာများထဲမှတစ်ခုသည် spaghetti ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းအားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဇွန်းဖြင့်မစားပါနှင့်။ အီတလီလူမျိုးများအတွက်၎င်းသည်ယဇ်ကောင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ထမင်းစားပွဲနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ် il dolce ပါမရ။ သို့သော်စစ်မှန်သောအဆုံးသတ်သည်နိဂုံးချုပ်လိမ့်မည် ကော်ဖီအီတလီ၌ ရှောင်လွှဲ၍ မရသောအရာအချို့ကိုလည်းသင်သိသင့်သည်။
အထူးသဖြင့် Tuscany ကဲ့သို့ဒေသများတွင်သင်မလုပ်သင့်သောအရာသည်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကမင်းကိုဂြိုလ်သားတစ်ယောက်လိုကြည့်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုတောင်းပါ expresso machiatto သို့မဟုတ်ဖြတ်၊ တစ်ခု ristretto သို့မဟုတ်ကော်ဖီပျက်သို့မဟုတ်နှစ်ဆသို့မဟုတ် နှစ်ဆမရ။ သို့သော် ပို၍ ပုံမှန်ဖြစ်သည် ကပ္ပီစီနိုကော်ဖီ၊ နွားနို့ပူပူနှင့်နို့အမြှုပ်များနှင့်ညီသောအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အီတလီမှာအစားအစာအတွက်ရည်စူးထားတဲ့ဒီအပိုင်းရှည်မှာ၊ transalpine တစ်ခုအတွက်၊ သူ့အမေနဲ့အဖွားကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်သူတွေလို့ငါတို့ပြောလိမ့်မယ်။ သူတို့အတွက်၊ မိခင် နှင့် အဖွား သူတို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုချက်ပြုတ်တယ်၊ အဲဒါကိုဘယ်တော့မှမမေးဘူး။ အီတလီအတွက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး သူ့မိသားစုကမြင့်မြတ်တယ်.
transalpinos ၏နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာသူတို့၏နက်ရှိုင်းသောဘာသာတရားဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းများအရ၊ အီတလီလူမျိုး ၃၀% သာကက်သလစ်ဘာသာ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၀ န်ခံဝန်ခံသော်လည်းဘာသာရေးအစဉ်အလာသည်သူတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းကိုသင်လေးစားရန်လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့အဲဒါကသိသာထင်ရှားတယ်၊ အဲဒီအစား၊ လူ ဦး ရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်သူဟုကြေငြာသည်.
ဒါဟာအီတလီမှာဖြစ်တာမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူး ဗာတီကန် (ဒီမှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် ဒီနိုင်ငံအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်)၊ ကက်သလစ်ဘာသာ၏ထိုင်ခုံ ထို့ကြောင့် transalpine နိုင်ငံ၌ဘာသာရေးမင်္ဂလာပွဲများနှင့်နှစ်ခြင်းများစွာအပြင်သန့်ရှင်းသူတို့၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အခမ်းအနားများနှင့်စီတန်းခြင်းကဲ့သို့အခြားအခမ်းအနားများလည်းရှိသည်။ ထို့ပြင်သူတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးသည်အီတလီလူမျိုးများကဲ့သို့ဖြစ်သည် သူတို့သည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းစွာစိတ်ထက်သန်စွာနေထိုင်ကြသည်.
ရောမကို ဖြတ်၍ မောင်းသောကားများ
ငါတို့မင်းကိုပြောမယ့်အရာဟာclichéတစ်ခုနဲ့တူပြီး၊ ယေဘူယျအားဖြင့်ယေဘူယျအားဖြင့်တူနေနိုင်တယ်။ သို့သော်၎င်းကိုယုံကြည်ခြင်းသည်သင်၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အီတလီလူမျိုးများသည်ကြောက်စရာကောင်းသောယာဉ်မောင်းများဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ပြောရင်ပိုကောင်းတယ် ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုသိပ်မလေးစားဘူး.
နိုင်ငံ၏မြို့ကြီးများတွင်ကားများသည်မီးနီကိုကျော်။ အလွန်အကျွံကျော်တက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့အလိုရှိရာသို့လှည့်လည်သည်။ လမ်းများသည်တကယ့်ပြိုင်ကားပတ်လမ်းများနှင့်တူသည်။ သို့သော်အားလုံးထက်၊ ယာဉ်များရပ်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောလူကူးမျဉ်းကြားတစ်ခုကိုမဖြတ်ပါနှင့်။ သူတို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။
အီတလီ၏ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများဖော်ထုတ်ခြင်းသည်လူကြိုက်များလာသည်။ ကြီးကျယ်သောဒီဇိုင်နာအချို့သည် transalpine ဖြစ်ခဲ့သည်မှာမှန်သည်၊ သို့သော်သာမန်အီတလီလူမျိုးများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်နှင့်အညီ ၀ တ်စားဆင်ယင်ရန်မှာအရေးမကြီးပါ။
သို့သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်မှန်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုအရမ်းစိုးရိမ်ကြတယ်မရ။ စူပါမားကတ် (သို့) အားကစားရုံ၌ပင်သူတို့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားတာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုအရမ်းဂရုစိုက်တယ် လှပသောတည်ရှိမှု (အသွင်အပြင်ကောင်း) နှင့်၎င်းတွင်အဝတ်အစားများသာမကဆံပင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
Verdi မှ 'Aída' ကိုကိုယ်စားပြုသည်
ယေဘူယျအားဖြင့်အီတလီလူမျိုးများဖြစ်ကြသည် ဂီတချစ်သူများမရ။ ဂီတအမျိုးအစားအားလုံးတို့တွင်အော်ပရာသည်၎င်းတို့ကိုစွဲမက်စေသည်။ ဤဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအစားသည် transalpine နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။
အော်ပရာဟုယူဆနိုင်သောပထမဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်ခဲ့သည် ဒယ်ဖနီ, အ Jacopo Peri၎င်းကို ၁၅၃၇ ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စာရေးဆရာကဲ့သို့သောအမျိုးအစားနှင့်ကျော်ကြားမှုအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သောအခါ ၁၉ ရာစု၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ Gioachino rossini, Francesco Bellini ထို့ထက်ကား၊ Giuseppe Verdi.
အဆုံးစွန်သည်အော်ပရာကျော်ကြားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အီတလီလူမျိုးများသည်၎င်းတို့၏လက်ရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည် တိုင်းပြည်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၏သင်္ကေတ ၎င်းနှင့်အတူသူတို့သည်အလွန်တရာနာမည်ကြီးလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်သူတို့အတွက်ခံစားရသည်နှင့်သာယှဉ်နိုင်သောအီတလီလူမျိုးများအတွက် ၀ ါသနာပါလာသည် ဘောလုံးအီတလီနိုင်ငံ၏ဓလေ့ထုံးစံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဤအရာသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်အဖြစ်များသည်။
သင်အီတလီသို့ခရီးသွားလျှင်သင့်ကိုအံ့သြစေမည့်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာမြို့သူမြို့သားများသည်အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏စွဲမက်သောစိတ်ထားကြောင့်လည်းထင်ရှားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စောင့်နေတဲ့အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနောက်ကျမှရောက်လာတာမို့အရေးမကြီးပါဘူး၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘောလုံးအသင်းကမကောင်းလို့၊ သူတို့ဘောလုံးအသင်းကမကောင်းတာကြောင့်၊
ဒါပေမယ့်သူတို့ကဆန္ဒပြတာကိုကြိုက်တယ် သူတို့မြေကိုမနာလိုမရ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အီတလီအကြောင်းမတိုင်ကြားသင့်ပါ။ မင်းလုပ်ရင်သူတို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့အပြုအမူတွေကိုရုပ်ဆိုးသွားအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ သူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝေဖန်နိုင်မှသာလျှင်
ဥပမာအားဖြင့်, quattr'occhi သို့ မျက်လုံးလေးလုံးကိုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး က ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲပြဿနာနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းရမည်ဟုပြောလေ့ရှိသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုအချုပ်ထဲပို့ဖို့သူတို့ပြောကြတယ် ဘိုကာ၌ aquaမရ။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည် ligarsila မှ dito သို့ ၎င်းကိုလက်ညိုးဖြင့်ချည်နှောင်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သူသည်နောင်တွင်လက်စားချေရန်သူပြုလုပ်ခဲ့သောပျက်စီးမှုကိုသတိရသည်။ အဲဒါကိုပြောရင် cadere della padella alla brace ၎င်းသည်ဒယ်အိုးမှအသားကင်ပေါ်သို့ကျသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်သင်ကအခြေအနေဆိုးတစ်ခုမှပိုဆိုးသောသို့သွားပြီဟုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာဂွါတီမာလာကနေ "guatepeor" ကိုငါတို့သွားတာနဲ့တူတယ်။ နောက်ဆုံးသူတို့ကလူတစ်ယောက်လို့ပြောရင်ပြီးတာပဲ brutta လာပါ i sette peccati capitali သူတို့ကသေစေတတ်သောအပြစ်ခုနစ်ပါးနှင့်တူပြီးဒါဟာငါတို့ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့နှာခေါင်းနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြနေတယ်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်အရေးကြီးဆုံးအချို့ကိုသင်ပြထားသည် အီတလီ၏ဓလေ့မရ။ ယုတ္တိဗေဒအရ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသအစဉ်အလာရှိသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်မမေ့နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သမျှတို့သည်မြောက်မှတောင်သို့အရှေ့မှအနောက်သို့သင်တွေ့နိုင်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာဓလေ့ထုံးစံလိုမျိုးအခြားဓလေ့တွေကျန်သေးတယ် သူတို့ကိုင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ (ဥပမာ၊ ရှေ့နေ Buscetti) သို့မဟုတ်၎င်းကိုနှစ်သက်သည် aperitivo.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » italia » အီတလီဓလေ့